Tuesday July 28, 2020 - 16:32:00 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Maxkamad kutaal magaalada Kuwalalambuur ee caasimadda wadanka Malaysiya ayaa eedo culus ku oogtay Najiib Cadi Risaaq oo horay usoo noqday R/wasaaraha wadankaasi.
Ninkan siyaasiga ah ayaa loo haystaa illaa iyo 7 dacwadood oo badankood kusaabsan musuq maasuq iyo wax isdabamarin isagoo ka faa'iidaysanayay awoodda maamul ee uu gacanta ku hayay.
dacwad oogayaasha maxkamadda sare ee Malaysiya ayaa Najiib Cabdi Risaaq ku eedeeyay in uu lunsaday lacago malaayiin doollar ah islamarkaana uu gacanta ku dhigtay faracyada sanduuqa dhaqaale ee wadanka isagoo qoyskiisa si gaar ah ugu maalgelinayay.
Maxamed Nazlaan oo ah qaadiga maxkamadda sare ayaa sheegay in hay'adda difaaca qareennada Malaysiya ay usuurtageli waysay in ay shaki geliyaan dhammaan dambiyada uu ku eedaysanyahay R/wasaarihii hore ee wadankaasi.
Najiib ayaa ku eedaysan in lacag dhan 10 malyan oo dollar uu ku shubtay akoonkiisa gaarka ah lacagtaas oo ay lahayd shirkadda SRS International ee taabacsan sanduuqa dhaqaalaha qaranka ee wadanka Malaysiya.
Maxkamadda ayaa R/wasaarihii hore ku xukuntay in 12 sanadood oo xarig ah iyo in uu bixiyo lacag ganaax ah oo malaayiin Dollar ah.
Waa markii ugu horraysay oo maxkamad kutaal Malaysiya ay xukun kan lamid ah ku riddo mas'uul wadanka soo maamulayay tobanaan sano.